ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရဦးဆောင်မှု လိုအပ် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရဦးဆောင်မှု လိုအပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် အစိုးရဦးဆောင်မှု လိုအပ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ အစိုးရရဲ့ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းက အရေးကြီးကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ashok Nigam က မတ်လ ၄ ရက် ဒီကနေ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ နီဂမ်ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်တွေအတွက် ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ ဒေသခံသတင်း ထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး အဲဒီလိုပြောခဲ့တာပါ။
ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်က “ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စဟာ အရေးပါတဲ့ကိစ္စ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်း အစိုးရဘက်က တောင်းဆိုလာမယ်ဆိုရင် အကူအညီပေးသွားဖို့ အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ အခုလိုမျိုး ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စရပ်တွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေလည်း ကုလသမဂ္ဂမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းဖို့ အစိုးရရဲ့ဦးဆောင်မှုသာ အဓိကလိုအပ်နေ တာဖြစ်ပါတယ်” လို့ စကားပြန်ကတစ်ဆင့် သတင်းထောက်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေက ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် အယုံအကြည်ကင်းမဲ့နေတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း ဘယ်ပုံ ဘယ်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကို အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်း Mr. Ashok Nigam က ပြောပါတယ်။
This entry was posted on March 4, 2013, in ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← စာရေးသူ ရဲရင့်သစ္စာ ရေးသားပြုစုသော “သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်” စာအုပ် ထွက်ရှိ “ဗုဒ္ဓဘာသာမြစ်ဖျား နှင့် သမိုင်းရှုထောင့်“
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဆွေးနွေး →